The University of Queensland - Education esenidụt na Australia
The University of Queensland Nkọwa
tọrọ ntọala : 1909
Echefukwala atụle The University of Queensland
Idebanye aha na The University of Queensland
The University of Queensland (UQ) bụ otu n'ime Australia si eduga nnyocha na ozizi oru. Anyị na-agbalịsi maka izu oke site kere eke, ichebe, nyefe na itinye ihe ọmụma. N'ihi na ihe karịrị otu narị afọ, anyị gụrụ akwụkwọ na-arụ ọrụ pụtara ìhè ndị mmadụ iji napụta ihe ọmụma na-edu ndú maka ụwa ka mma.
UQ kwubara na n'elu 50 dị ka tùa site QS World University Rankings na Performance ọkwa nke Scientific akwụkwọ maka World Universities. The University nwekwara kwubara 52 na US NewsBest Global Universities Rankings, 60 na Times Higher Education World University Rankings na 77 na Ọmụmụ ọkwa nke World Universities.
The University nke zuru ụwa ọnụ research n'ọnọdu pụta ìhè site na ntuli aka nke ise UQ scientiststo na Australian Academy nke Science (AAS) na 2015 - Fọrọ nke nta otu ụzọ n'ụzọ anọ nke 21 ọhụrụ ndị ibe na ihe ndị kasị ihe ọ bụla na alụmdi na mba.
The ise ọhụrụ ndị ibe sonyeere otu dị na ìgwè nke 29 UQ ọkà mmụta sayensị kwetara na ndị AAS dị ka ndị ibe ebe ọ bụ na 1988, eweta ngụkọta ọnụ ọgụgụ ndị UQ ọmụmụ ha bụ ndị otù nke otu n'ime Australia isii prestigious mụtara academies ka 166.
UQ bụ otu n'ime nanị atọ Australian òtù nke zuru ụwa ọnụ Universitas 21, a tọrọ ntọala so Group of Eight (Go8) mahadum, na onye na Universities Australia.
Na-ezi na mmụta mma
Ọkà na kpaliri ndị nkụzi na-integral ka enye ezi ozizi na mmụta a ga esi maka ụmụ akwụkwọ.
UQ nwere ike na-elekwasị anya ozizi mma, emeri ihe Australian Awards maka University Teaching karịa ihe ọ bụla ọzọ na mba na-adọta ka ukwuu ná ndị Queensland kasị elu agụmakwụkwọ achievers, nakwa dị ka n'elu interstate ma esenidụt ụmụ akwụkwọ.
The nkụzi nke UQ na-enyefe mma na-amụta ahụmahụ na a ga esi maka ụmụ akwụkwọ ha.
Mgbe afọ 2013, UQ sonyeere edX - ụwa na-eduga Constrium nke Oke Open Online Courses (Mooca), jikotara aka wee tọrọ ntọala site na Harvard University na Massachusetts Institute of Technology (E nwere).
UQ bụ otu n'ime nanị abụọ Australian ichata so mahadum esịne ke not-nke na-enweta edX enterprise, na UQx na-anọchi anya a na nzukọ na nnọchite nke University. UQx-arụ ọrụ na Mahadum si agụmakwụkwọ izi ihe mkpara ike ma na-ewetara a nso nke MOOCs site na edX n'elu ikpo okwu.
UQx nwere iri MOOCs-agba agba na edX. Ọzọ anọ a na-mepụtara, ekpuchi-achị gụnyere ndị ọkà mmụta sayensị ase, nlekọta ahụike, na meta-nkà ọmụmụ na employability na imekọ ihe ọnụ. Ebe ọ bụ na ahapụ ndị ya na mbụ N'ezie on edX na March 2014, UQx ka aha ihe karịrị 640,000 sonyere na 219 mba.
The UQ Advantage na-enye ụmụ akwụkwọ ohere, nhọrọ ma na-akwado nke ga-enyere ha aka nweta ha n'otu n'otu na-achụso, na-isi na ha họọrọ n'ugbo na ghaghị mmetụta na ọha mmadụ na ha bi. Na mgbakwunye na mgbanwe na omume oke, -amụrụ uru na-agụnye ifet a dịgasị iche iche nke gbasaa eme n'oge ọmụmụ ha. Mmụta nwere ike na-amụ ná mba ọzọ, isonye na nzukọ na nnyocha ohere, ohere karịa 190 klọb na ọha mmadụ, na ahu nagide Sporting na omenala ụlọ ọrụ.
na 2015, na University nwere 50,836 ụmụ akwụkwọ gụnyere 12,666 mba ụmụ akwụkwọ si 141 mba. Ọ nwere otu n'ime Australia kasị ukwuu PhD enrollments, na ihe karịrị 13,800 Postgraduate ụmụ akwụkwọ, na-eme ememe ya 12,000th PhD gụsịrị akwụkwọ na 2015.
UQ na-na-chọpụtara na-eme otutu bịara ibi nwatakịrị na eme na-amụrụ njigide na employability. The University na-arụ ọrụ kwupụta na oji ya emeri na ebumnobi site na-emepe emepe ụzọ na-arụ ụmụ akwụkwọ - na site n'ịchụso kasị mma-omume inductions na-amụrụ ahụmahụ.
The University ndị pụtara ìhè 225,000-plus Alumni agụnye a Nobel Laureate, abụọ Fortune 500 ụlọ ọrụ CEOs, ihe Academy Onyinye-eto eto, na ndi-isi ọchịchị, iwu, sayensị, ọha ọrụ na nkà. The University-agba ya Alumni dị ka ya kasị ukwuu akụ. Ha rụzuru ka University ukwuu - na, -erite, na University ga gbasie mbọ ike ka ya aha.
Faculty of Business, Economics na Iwu
Faculty of Engineering, Architecture na Ozi Technology
Faculty of Health na akparamàgwà Sciences
Faculty of Medicine na Biomedical Sciences
Amụma n'ihi na a mahadum na Queensland malitere na 1870s. A Royal Commission na 1874, onyeisi oche site Sir Charles Lilley, na-atụ aro ozugbo oruru nke a mahadum. Ndị megide a mahadum rụrụ ụka na oru kama agụmakwụkwọ akwụkwọ nke ọzọ dị mkpa na ihe na aku na uba na-adịkwaghị isi ụlọ ọrụ. Ndị na ihu ọma nke mahadum, na ihu nke mmegide a, agbara Oxford University na Cambridge University na chọrọ kama a nlereanya ewepụtara ufọt ufọt n'ebe ọdịda anyanwụ na-ekwu, nke USA. A abụọ Royal Commission na 1891 na-atụ aro na Nsonye nke ise ezi ikike iche na a ọhụrụ mahadum; Arts, iwu, Medicine, Science na Applied Science. Education n'ozuzu e nyere a ala mkpa ná Queensland na Amawaputala, na na a ógbè na a mmuta ọnụego 57% na 1861, isi akwụkwọ nke mbụ nchegbu ọma n'ihu sekọndrị na oru mmuta. The ọchịchị, n'agbanyeghị Nchoputa nke Royal Ụlọrụ, na-adịghị njikere ime ego oruru nke a mahadum.
na 1893 na Queensland University Extension Movement malitere site na otu nke ndị mmadụ n'otu n'otu na-ahazi okwu ihu ọha ọmụmụ na ụlọ akwụkwọ ndị okenye, na-enwe olileanya ejikere wider obodo nkwado maka a mahadum na Queensland. na 1894, 245 ụmụ akwụkwọ E debara aha ndọtị klas na okwu a kọwara dị ka ndị bara uru ma ọ bara uru. na 1906 na University Extension Movement haziri ndị University Congress, a forum maka mmasị ndị bịara mgbakọ ahụ na-akwalite echiche nke a mahadum. Mkpebi a chịkọtara, a ego malitere na a draft Bill maka a Queensland University a kwadebere. Nchegbu tọrọ na uru nke mahadum na ya mkpa maka azụmahịa nke Queensland. The obodo nke Congress na-zijere Queensland Premier William Kidston. na October 1906, iri isii acres na Victoria Park na gazetted na mahadum nzube.
na 1910 mbụ ozizi ikike e kere. Ndị a gụnyere Engineering, ochie, Mathematics na Chemistry. Na December nke otu afọ, Sineti họpụtara anọ mbụ professors;Bertram Dillon Steele na onwu, John Lundie Michie na ochie, Henry James Priestley na mgbakọ na mwepụ na Alexander James Gibson na engineering. na 1911 mbụ ụmụ akwụkwọ debara aha. The University mbụ ọmụmụ ke Government ụlọ ndị ahụ na 1911 na 83 maliterela ụmụ akwụkwọ na Sir William MacGregor bụ nke mbụ chancelo (na Reginald Heba Roe ka osote-chancelo). Mmepe nke University e-egbu oge Agha Ụwa nke Mbụ, ma mgbe agha ụwa nke mbụ na mahadum enrollments maka muta na nnyocha were ọsọ dị ka ina maka agụmakwụkwọ ka elu mụbara na Australia. N'ihi ya, ná mmalite 1920s na-eto eto University nwere anya n'ihi na a saa mbara campus dị ka ya mbụ saịtị na George Street, Brisbane nwere mmachi ụlọ maka mgbasa.
na 1927, Dr James O'Neil Mayne na nwanne ya nwaanyị Mary Emelia Mayne, nyere a Onyinye nke ihe dị £ 50,000 na Brisbane City Councilto inweta 274 acres (111 o nwere) ala dị na St Lucia na nyere ya ndị University of Queensland ka ya na-adịgide adịgide n'ụlọ. N'otu afọ, na pitch dobe nnwale malitere Prọfesọ Thomas Parnell. The nnwale e kọwara dị ka ụwa kasị ochie na-aga n'ihu nke a ụbọchị. Enweghị ego na-egbu oge mmepe nke St Lucia campus. N'ihi ya, na-ewu nke University mbụ ụlọ ke St Lucia naanị malitere na 1938. Ọ na-e mesịrị aha ya bụ ndị Forgan Smith Building, mgbe Premier nke ụbọchị na e dechara ya na 1939. DuringWorld War II, na Forgan Smith Building e ji mee ka a agha isi na ya na-eje ozi mbụ dị ka elu ụlọ ọrụ maka Allied Land Forces na South West Pacific.
na 1990, Australia hazigharịrị ya agụmakwụkwọ ka elu usoro site abolishing ọnụọgụ abụọ usoro nke mahadum na kọleji nke elu-akụziri. N'okpuru mgbanwe a, na University jikọrọ ya Queensland Agricultural College, guzosie ọhụrụ UQ Gatton campus. na 1999, UQ Ipswich malitere ọrụ dị ka otu n'ime kpamkpam Web-nyeere campuses na Australia.
The Ipswich campus bụ ndị fọrọ nke nta 20 ụlọ na ndị ọzọ karịa 5001 ụmụ akwụkwọ na ihe fọrọ nke nta 25 hectare (62 acres). Ọmụmụ awa gụnyere: arts, azụmahịa, na nkà mmụta ọgwụ na-elekọta mmadụ na sayensị nakwa dị ka Mmekọrịta imewe. Ọ na-emi odude nso Central Ipswich, Queensland, n'ebe ndịda nke CBD. Nso akara gụnyere Limestone Park, Noo Okporo ígwè Museum na RAAF Base Amberley. The saịtị ụbọchị laghachi 1878 na mmeghe nke Ipswich alaka nke Woogaroo aghọtaghị Isi mgbapu. Operations nọgidere ruo mgbe 1910 mgbe ọ ghọrọ Ipswich Hospital maka ara. na 1938 ọ e renamed na Ipswich Mental Hospital na na 1964 ọ e renamed ọzọ dị ka Ipswich Special Hospital. Ọ e mesịrị aha ya bụ ndị Challinor Center na 1968 na nsọpụrụ nke Dr. Henry Challinor, ụgbọ dọkịta na-awa na obi ike. site 1968 ka 1997 na Challinor Center jere ozi dị ka alụmdi n'ihi na ndị mmadụ na ndị nwere ọgụgụ isi nkwarụ. Mgbe afọ 1997 na Challinor Center malitere ya mbụ ogbo nke mgbanwe dị ka ọhụrụ UQ Ipswich campus. na 2014, UQ resịrị Ipswich Campus na University of Southern Queensland, ikwere na a na mpaghara ozizi campus ga-mma tinye n'ọrụ site USQ. Na Mee 2013, UQ sonyeere edX, mba Constrium nke oke-emeghe online ọmụmụ (Mooca). N'ihi na-amalite na May 2014, mbụ anọ UQxcourses ga-ekpuchi hypersonics, ebe okpomọkụ ala gbara osimiri okirikiri ecosystems, Biomedical Onyonyo na sayensị nke-adị kwa ụbọchị echiche.
The University of Queensland guzobere ihe Act of State nzuko omeiwu na 10 December 1909 ka ememe ncheta nke 50th ncheta nke Queensland na nkewa si ógbè nke New South Wales. The Act kwere maka mahadum ga-achịkwa a okenye nke 20 ndị ikom na ndị Sir William MacGregor, na-abata Governor, a họpụtara mbụ chancelo na Reginald Heba Roe dị ka osote chancelo. Government House (ugbu a Old Government House) na George Street E wepụtara maka University esonụ ọpụpụ nke Gọvanọ na Bardon obibi Fernberg, sparking mbụ nrụrịta ụka banyere kasị mma ọnọdụ maka mahadum.
Ị chọrọ atụle The University of Queensland ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
The University of Queensland na Map
photos: The University of Queensland ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke The University of Queensland.